Laga soo bilaabo Italia Trasporto Aereo Airline ilaa Abaalmarinta Daacadda ee Alitalia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Laga soo bilaabo Italia Trasporto Aereo Airline ilaa Abaalmarinta Daacadda ee Alitalia
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maxaa ku dhacaya abaalmarinta daacadnimada Alitalia?
Bilawga cusub ee Italia Trasporto Aereo (ITA) - oo horay loo yiqiinay Alitalia - waxqabadyada, ITA waxay ku shaqeyn doontaa raxan ka kooban 52 diyaaradood, 7 ka mid ah ay yihiin jidh ballaaran iyo 45 jir cidhiidhi ah. Laakiin maxaa ku dhici doona abaalmarinta daacadnimada Alitalia xilliga kala guurka?
Maamulaha guud ee shirkada cusub ee Fabio Lazzerini ayaa shirkiisa jaraa’id ku xaqiijiyay in shirkadu ay kori doonto ilaa 78 diyaaradood sanadka 2022.
Kordhintaani waxay keeneysaa 26 diyaaradood oo dheeri ah kuwaas oo 6 ay noqoneyso jidh ballaaran iyo 20 jir cidhiidhi ah.
Maxaa ku dhici doona abaalmarinta daacadda ee Alitalia marka ay duulimaadka cusub ee qaranku duusho?
Said Lazzerini: “Laga bilaabo 2022, waxaan fileynaa inaan bilowno soo bandhigida diyaaradaha jiilka cusub ee raxankan, kaasoo si tartiib tartiib ah u beddelaya diyaaradihii hore ee tikniyoolajiyadda ahaa. Dhamaadka 2025, raxanku waxay kori doonaan ilaa 105 (23 jir ballaaran iyo 82 ciriiri ah), oo leh 81 diyaaradood oo jiil cusub ah (oo u dhiganta 77 boqolkiiba wadarta guud) taas oo u oggolaan doonta - ujeedooyinka newco - inay si weyn u in la yareeyo jawiga saameynta iyo in la wanaajiyo waxtarka iyo tayada dalabku. ”
ITA waxay macsalaameyneysaa Alitalia MilleMiglia - Maxaa ku dhacaya dhibcaha kaarka Alitalia?
Kaarka daacadnimada ayaa laga beddelaa Alitalia ilaa ITA waxaa la qorsheeyey badhtamaha bisha Oktoobar marka ay Alitalia joojiso duulimaadkeeda isla markaana ITA cusub (Gaadiidka Cirka ee Talyaaniga) uu bilaabmo, taas oo ka tagaysa oo keliya 52 diyaaradood. Sida laga soo xigtay agaasimaha guud, tan ayaa ku filan in "la tartamo." Wuxuu yiri iyada oo ay run tahay in shirkadaha kale ay leeyihiin maraakiib waaweyn, "imisa diyaaradood ayaa hadda duulaya?" Ayuu yidhi Lazzerini, marka la eego dhibaatada COVID, way yar yihiin.
Lazzerini ayaa sharraxay: “Si looga fogaado in lagu bixiyo dhammaan lacagta dowladda Talyaaniga, waxaan dooranay qaab tartiib tartiib ah oo lala xiriirinayo tirada taraafikada ee la filayo bilaha soo socda. Haddii noocyada kala duwani aysan horseed u noqon xiritaanka cusub, shirkaddu waxay kordhin doontaa tirada diyaaradaha [illaa 78 sanadka 2022] iyadoo ay la socoto kordhinta taraafikada. ”
Maxaa ku dhacaya kaarka Alitalia ee MilleMiglia?
Guddiga Yurub wuxuu go'aansaday in Alitalia Loyalty, oo ah shirkadda maamusha barnaamijka daacadnimada ee shirkadda Talyaaniga ee "MilleMiglia," ay tahay in laga iibiyo qandaraaska ugu sarreeya iyada oo loo marayo qandaraas dadweyne, daahfuran oo u furan dhammaan dhinacyada daneeya. Laakiin ITA, diyaaradda cusub ee gobolka, ma awoodi doonto inay kaqeyb gasho tartankan iyada oo calaamad u ah joojinta udhaxeysa labada shirkadood. Kaadhadhka MilleMiglia ee wareegayaa waxay ku dambayn doonaan milkiile cusub oo aan wali la aqoon oo waliba ka shaqeyn kara aag aan ka ahayn qaybta duulista.
Maxaa dhacaya laga bilaabo Oktoobar 15, 2021?
Iibsadaha barnaamijka daacadnimada ayaa go'aan ka gaari doona sida loo isticmaalo barkadda abaalmarinta ee maylalka ee xubnahan (ilaa 5 milyan) ay uruursadeen. Maaddaama maylyadan ay deyn ku yihiin kuwa maamula barnaamijka, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la arko sida "dib loogu bixin doono". Haddii milkiilaha cusub ee Loyalty uu ahaan lahaa, tusaale ahaan, summad dukaan weyn, waxay u rogi kartaa maylalkaas maylalka foojarrada wax lagu gado, ayuu yiri Lazzerini.